> Resource > Mac > Pinnacle Studio for Mac - fududahay in la isticmaalo Video Editor for Mac
Pinnacle Studio waa fududahay in la isticmaalo tafatirka software video in lagu soo qabto xusuus leh in ka badan 1,800 oo saamayn, qalabka tafatirka waxtar leh, music, koobab iyo waxyaalaha kale. Waxaad sidoo kale ku raaxaysan doonaa faa'iidooyinka ay ku wadaagaan filimada ee Youtube, internetka, DVD, iyo in ka badan. Si kastaba ha ahaatee, Pinnacle waa Windows kaliya tafatirka madal video. Inta aan ka ogahay, ma jiro Pinnacle u Mac in jadwalka, ama ugu yaraan aan aad ka heli karto Pinnacle Mac ay homepage. Waxaan rajeynayaa in tani ay uga jawaabi kari waayeen su'aalahan oo dhan:
Ma Pinnacle Studio sameeyo version ah Mac ah?
Sida loo soo dajiyo Pinnacle Studio 14 on Mac ah?
Ma jiraa barnaamij sida Pinnacle Studio for Mac?
Mar kale, jawaabaha oo dhan MA yihiin. My soo jeedinaya waa in la helo Pinnacle Studio ah ee kale Mac. Hal waxtar leh waa Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) (Mountain Libaaxa, Libaaxa taageeray). Waa barnaamij wanaagsan sida Pinnacle Studio for Mac si kor loogu qaado iyo edit aad video la soo diyaariyeen ah ee saamaynta muuqaal ah (ma aha sida ugu badan ee Pinnacle laakiin ku filan si ay u isticmaalaan), guurka, koobab, iyo dhammaan qalabka tafatirka video joogto ah. Video Editor Kuu ogolaanaysaa inaad dhoofin video dhammaan qaabab video oo caan ah, share on YouTube iyo gubi video inay DVD loogu daawashada TV-ga. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
Maxaad u dooratay Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) sida software video tafatirka Pinnacle Mac ah? Halkan waxaa ku qoran sababaha.
Talaabada 1: Jiid iyo rid Fikradaha Your
Barnaamijka ayaa ku soo beegmay iyadoo interface ah dareen iyo jiididda-iyo-dhibic. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi content in si degdeg ah wax ka bedel. Plus, wax kasta oo aad rabto in aad, waxaad ka heli doontaa aalad saxda ah ee faraha ku jiraan saamaynta muuqaal ah, kala guurka, horyaal, falinjeeerka, lana siii, qoqobada, tafatir audio (track video, voiceover iyo music soo jeeda), iwm
Talaabada 2: Taageer All Popular Video / Audio / Graphic qaabab
Taageero qaab Broad ku siinayaa dhaw raaxadeeda waxa ugu badan si Spice aad videos in Video Editor. Diinta looma baahna. Waxaa kuu baaqanaya waqti iyo lacag si ka koobanahay masterpiece a si fudud oo dhaqso. Qaababkan soo socda si buuxda ay taageerayaan,
Qaabab Video : MOV, MP4, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, FLV, AVI, DAT, wmv, MKV, DV, mod, TOD, VOB, 3GP, ASF, F4V, M4V, Mpg, EVO
Qaabab Audio : M4A, AAC, AC3, AIF, AIFF, daanyeer, AU, FLAC, MKA, MP2, MP3, OGG, regelingen, WMA
Qaabab Image : BMP, JPG, PNG, GIF, TIF, ICO
Feature tafatirka Audio waa uula kale Pinnacle Studio Mac. Video Editor Ka mid ah wax ku ool ah oo si sahlan ay u isticmaalaan qalab maqal ah. Wax kasta oo ay tahay wadada audio ee video, voiceover ama music soo jeeda, aad edit karaa waqti la falinjeeerka, la isku qasin, saamaynta audio, iwm
Talaabada 3: Share on YouTube, Computer, DVD iyo meel
Video Editor Siinayaa ka sii fursado ay ku wadaagaan filimada aad. Movies la sameeyey si ay u wadaagaan, iyo fursadaha wadaaga yihiin dhammaadka lahayn, oo ugu muhiimsan waa in dhammaan waa at farahaaga.
Qaabka : badbaadi videos in maxaliga ah ee loo maqli karo ka dib qaabab kala duwan sida MOV, MP4, M4V, MKV, wmv, FLV, iwm
Device : Output filaayo in videos for ciyaaro ee qalabka la qaadi karo sida iPod, iPhone 4, iPad, kamidka ah, Zune, PSP, iwm
YouTube : Si toos ah geliyaan videos in YouTube si aad ula wadaagto video curiyay, sidoo kale diraan farriimaha si aad saaxiibo Twitter iyo Facebook.
DVD Abuur : gubatay videos dhammeeyayna iyo sawiro si DVD ama badbaadin sida warbaahinta DVD, DVD ama folder image ISO files si ay u gubaan qalab kale.
Waxaad la siiyo Video Editor isku day ah? Ha ka maqnaan tan kale Pinnacle Mac weyn. Oo haddii aad isticmaalayso barnaamij ka fiican sida Pinnacle Studio for Mac, aynu og in comment ah.